I-Quaint Apartment kwi-Ondenval eneTerrace
Ondenval, Wallonie, Belgium
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAnouk - BELVILLA
UAnouk - BELVILLA unezimvo eziyi-4725 zezinye iindawo.
Eli gumbi lihle linamagumbi amabini e-Ondenval linendawo ekwabelwana ngayo ukuze ukonwabele iingokuhlwa ezipholileyo zebarbecue. Indawo yokuhlala yenza indawo efanelekileyo yokuhlala kusapho okanye iqela labantu aba-5.
I-Ondenval yidolophana encinane. Kukho izinto ezininzi zokwenza kulo mmandla kubandakanya ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibilika, ukukhwela ihashe, ukuloba kunye nentenetya. Ungacwangcisa utyelelo kwidolophu yaseMalmedy okanye eStavelot Abbey, kwisekethe yaseFrancochamps, njl. njl. Kwi-5 km yokuphumla kumbindi wedolophu. Iindawo zokutyela kunye nee-nightlife pubs kwi-9 km zimema ukuba uzame iincasa zasekhaya.
Eli gumbi litofotofo linesitiya ekwabelwana ngaso ukuze uhambe uye kubethwa ngumoya kwaye uhlale ngaphandle. Abantwana banokuchitha iiyure bedlala kwibala lebhola. Kwigumbi lokuhlala, unebhedi yesofa yokuphumla ngelixa ubukele iimuvi okanye ufunda ngokuthula. I-oveni ekhitshini ilungele ukubhaka iikeyiki zakho ozithandayo kunye nepizza. Ungacela ibhedi kunye nesitulo esiphezulu simahla. Ukuya kutsho kwizilo-qabane ezi-4 ezivumelekileyo ngentlawulo eyongezelelweyo ngesilo-qabane ngasinye.
Uyilo: Umgangatho osezantsi: (indawo yokugcina(isikhenkcisi(ekwabelwana ngayo nezinye iindwendwe), isomisi (kwabelwane nezinye iindwendwe), umatshini wokuhlamba (kwabelwane nezinye iindwendwe))
Kumgangatho woku-1: (Igumbi lokuhlala(ibhedi yesofa enye, iTV(intambo), unomathotholo), Ikhitshi(umatshini wekofu, i-oveni, imicrowave, ifriji-isikhenkcezisi), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela esi-2x, indlu yangasese))
Kumgangatho we-2: (igumbi lokulala (2x ibhedi enye), igumbi lokulala (2x ibhedi eyodwa)
iterrace(ekwabelwana ngayo nezinye iindwendwe), igadi(kwabelwane ngayo nezinye iindwendwe, ibiyelwe), ifenitshala yegadi, iBBQ, iboules court
Izimvo eziyi-4 727
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ondenval